बिचरी सियोना श्रेष्ठ को स्वास्थ्य फेरी स’मस्या देखिएको छ!!! फेरी पोलण्ड जादै सिघ्रा स्वास्थ्य लाभ को कामना गरौ|| पुरा पढ्नुहोस – AB Sansar
December 10, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on बिचरी सियोना श्रेष्ठ को स्वास्थ्य फेरी स’मस्या देखिएको छ!!! फेरी पोलण्ड जादै सिघ्रा स्वास्थ्य लाभ को कामना गरौ|| पुरा पढ्नुहोस
उनी १ 13 महिनाको बच्चा सियोना हुन् र उनी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप १ नामको दुर्लभ रोगबाट पीडित छिन् जसले उपचार गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ र धेरै पैसा चाहिन्छ अर्थात् एनआर भन्दा बढी। २० करोड। … अधिक
उनका अभिभावकहरूले सहयोगको लागि अभियान गरिरहेका छन्। बिभिन्न सार्वजनिक व्यक्तित्वहरु पनि उनीको लागि सहयोग माग्दै छन्।
राम्रो शिक्षा र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एक राम्रो मानव। उनीसँग हरेक दिन यती छिटो गएको थियो जब हामीले बुझ्यौं कि उनी पहिले नै months महिना बितिसकेकी छ। मैले तँले महसुस गरिन कि ऊ उनको टाउको समात्न वा सडक छेउमा जान सक्षम छैन। उनी सामान्य स्तनपान गर्छिन् र उनको सामान्य वजन बढाउँदै थिई। हाम्रो परिवारका केहि सदस्यहरूले यो सामान्य कुरा बताए र उनले केही महिनामा उनको टाउको समातिन्। हामी विश्वास गर्छौं र उनको उज्जवल भविष्यको सपना देखिरहेछौं। दिन बित्यो र उनी अब months महिना भइसक्यो। तैपनि उनले आफ्नो टाउको समातिन्। अब हामी चिन्तित भयौं,
त्यसैले हाम्रो डाक्टरलाई भेट्न आए। हाम्रो डाक्टरले केही न्यूरोलजिकल जाँच, केही रक्त परीक्षण र मस्तिष्क स्क्यान गरे र परीक्षण गरे। सबै सामान्य थियो र हामीलाई बताइएको थियो कि उनी शैशवकालको सौम्य हाइपोनिसिया हुनसक्छिन्। केवल केहि फिजियोथेरापी र चिन्ताको लागि धेरै केहि छैन:
इच्छुकले सँगै हात मिलाउन सक्छ उसलाई आवश्यक उपचार प्राप्त गर्न मद्दत गर्न। उनीसँग ज्यादै थोरै समय छ ।यसैले त्यहाँ “टीम सियोना – SMA” नामको समूह छ जहाँ
व्यक्तिहरू उनीबारे अधिक जानकारी लिन सामेल हुन सक्छन्। व्यक्तिले उनको बुबाआमालाई सम्पर्क गर्न सक्छन उसलाई र परिवारले सार्वजनिक बैंक / eSewa विवरण सार्वजनिक गर्न A / C नाम: सियोना श्रेष्ठ A / C No: 206500000031524 काठमाडौंको बैंक। परासी शाखा स्विफ्ट कोड: BOKLNPKA वा Esewa आईडी: 9847206466 9816457809
चिकित्सकको लापरबाहीले सुत्केरीको मृ’त्यु भएको भन्दै अस्पताल तोड’फोड
December 8, 2020 Ab-संसार